फोहोर व्यवस्थानमा थप चुनौति – Sajha Bisaunee
फोहोर व्यवस्थानमा थप चुनौति
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका लागि फोहोर व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बनेको छ । नगरभित्र निस्कने फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । पालिकाले फोहोर संकलन गरेर वीरेन्द्रनगर र बराहताल गाउँपालिकाको सिमानापर्ने जंगलमा फाल्दै आएको छ । तर यसरी फालिने प्रक्रिया निकै अव्यवस्थित छ । व्यवस्थित रूपमा विसर्जन हुँदैन । नगरपालिकालाई अर्को चुनौति पनि थपिएको छ । बराहताल गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा जथाभाबी फोहोर फालिएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
वीरेन्द्रनगर–१ को पश्चिम र बराहताल–१० को पूर्व सीमाना जोडिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले वडा नं. १ को तारेभिर नजिकै फोहोर फाल्छ । सोही स्थानमा फोहोर फाल्दा आफ्नो क्षेत्रमा परेको भन्दै बराहताल गाउँपालिकाको वडा नं. १० ले आपत्ती जनाएको हो । वीरेन्द्रनगरले फोहोर फाल्ने गरेको आधा भू–भाग आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने बराहतालको दाबी छ । जानकारीविना आफ्नो वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्न थालिएपछि जेठ ३१ गते बराहताल–१० का बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जथाभाबी फोहोर विसर्जन गर्दा दुई पालिकाबीच द्वन्द्व चर्किने देखिएको बराहतालका स्थानीय बताउँछन् । वन क्षेत्रमा यत्रतत्र फोहोर फाल्दा त्यसको असर आफूहरूलाई परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । सहमति र सहकार्यविना मनपरी फोहोर फाल्ने र जलाउँने गर्दा निकै प्रदुर्षण भइरहेको नागरिकहरू बताउँछन् । बराहतालको वडा नम्बर १० को सिमलचौर, पाती, धुुम्के, फौजापानी लगायतका क्षेत्र फोहोरका कारण बढी प्रभावित भएका छन् । फोहोर व्यवस्थापनमा वीरेन्द्रनगर बेखबर बनेको बराहतालका जनप्रतिनिधिको आरोप छ । साथै समयमै व्यवस्थापन नगरे अवरोध गर्ने चेतावनीसमेत स्थानीयले दिएका छन् ।
फोहोर व्यवस्थापनको माग बराहतालको मात्रै होइन । केही दिन पहिले वीरेन्द्रनगर–१ का स्थानीयले पनि फोहोर जथाभाबी फाल्दा दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै नगरपालिको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले सोही कारण एक दिन फोहोर ढुवानीमा अवरोधसमेत गरेका थिए । उक्त क्षेत्रमा नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल साइट निर्माणको योजना अघि सारेको छ । तर लामो समयदेखि उक्त योजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । नगरले स्रोतको खोजी भइरहेको जनाएको छ । फाहोरले दुर्गन्ध फैलिएको विषयलाई मध्यजनर गर्दै छिट्टै कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । एकातिर फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, अर्कोतर्फ फरक नगरपालिका क्षेत्रमा फालिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । त्यसैले वीरेन्द्रनगरले आफ्नो पालिकाभित्र उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापनका लागि समयमै ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ ।
प्रकाशित मितिः ८ असार २०७९, बुधबार ०५:०३